KUSVIRA: piritsi rekuvandudza ichokwadi! 80 Makore-makore murume akomana kekutanga kumedza mushure mekuyedzwa kumhuka: Martin Vrijland
KUSVIRA: piritsi rekuvandudza ichokwadi! 80 Makore-makore murume akomana kekutanga kumedza mushure mekuyedzwa kumhuka
Akaiswa mukati THE SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 29 August 2019	• 1 Comment
David Sinclair mapurofesa kudhipatimendi re genetics, Blavatnik Institute uye pamwe-director wePaul F. Glenn Center yeBiological Mechanisms yeUkweguru kuHarvard Medical School. Mune mharidzo iri pasi apa, anotsanangura kuti kukwegura kwemuviri wemunhu kune chekuita nekurasikirwa neruzivo; Kufanana nekupera kwemashoko patepi yemagineti yekaseti yekaseti yekare, sezvo chizvarwa chekare ichiri kuzviziva. Izvi zvakafanana zvinoitika neruzivo rweDhijitari pamusoro pewebhu, asi nekuda kwekuti kodhi yekutonga inotumirwa iyo inotarisa kuti kana ruzivo rwacho rwasvika zvechokwadi kana kuti ruchida kuve neshungu, unogona kutamisa chikamu icho cheruzivo kana paine kurasikirwa kwedata.
Iyo yekuchembera maitiro zvakare kune zvese nezve kurasikirwa kwekodhi muDNA. Nekupukuta aya "scratches paCD", unogona kutora ruzivo. Nekuwedzera 'mucherechedzi', iyo iyo iyo ruzivo rwese paDNA inogona kudzoserwa zvakare sekunge yakarasika, iwe unogona kuita izvi. Kutanga uyu 'mucherechedzi' akaedzwa pamakonzo uye zvakakurumidza kuve pachena kuti kuita kwekukara mumakonzo kunogona kukurumidza nekurasikirwa nemaune kodhi. Nekudaro, iyo reverse yakashandukira kuva iyo nyaya: yakarasika DNA kodhi inogona kudzoserwa uye saka makonzo akaumbwazve.
Mune mharidzo iri pazasi yaDavid Sinclair iwe unowana tsanangudzo yakazara yeizvi zvese. Chinonyanya kundishamisa ndechekuti baba vake vane makore makumi masere vakasarudza kuti aida kuyedza piritsi rakadai. Mhedzisiro yacho haina kunyatso kuoma munguva pfupi yakadaro, asi zvinoita kunge paine kumira kwekusakara kwababa vaDavid uye anoratidzika kunge anonyanya kukosha. Zvese izvi ndezvechokwadi nhau dzakanaka dze transhumanists uye kana izvi zviwanikwa zvikauya kuburikidza nemakiriniki bvunzo, iri (rakanyanya kudhura) rekushambadzira shanduro pasina mubvunzo rinouya mumusika munguva pfupi. Zvinogona kufungidzirwa kuti piritsi rakadaro rinogona kungotengeswa kuvapfumi nevakakurumbira, kana chete nekuti iwe uchirarama nguva refu uye saka uchida imwe mari kuti urambe uchikwira. Iyo yekupedzisira tarisiro ye transhumanists ndeye, chokwadi, kusafa.
Kufunga biology uye DNA senge database ruzivo mune ino yedhijitari nguva ino inoita kuti inzwisise zviri nani kushanda kwese kodhi iyo kodhi. Pakutanga kutarisa, iyi nzira yekumisa uye kunyange kudzorera kukwegura inoita kunge inonakidza, dai zvisiri zvemazhinji matambudziko. Izvo zvicharevei kumari yepension, kunehuwandu hwepasi rose huri kuwedzera, kuwanikwa kwechikafu, mutero wezvakatipoteredza, nezvimwe? Solutions pasina mubvunzo ichagadzirirwa izvi, asi pane kunetseka kukuru. Icho chinonyanya kunetseka ndechekuti nekukora mabasa ese echikamu chimwe nechimwe cheDNA yedu, tave kusvika padyo nenguva apo vanhu vanogona kugadziridzwa kure. Haisi chete iyo Elon Musk's brain interface iri munzira (ona pano) Asi inogona kuverengerwa uye kunyorwa online. Saka isu hatisi kungoswedera pedyo nekusafa, asi isu tiri kuswededzawo padhuze neshanduko yakanangana nevanhu ve admin. Ini ndagara ndichinetseka kuti nei iyo yekushandisa system pane avo mafoni kubva ku Samsung, Huawei uye nezvimwe, zvine zita rekuti 'Android'. Isu tinoziva here kwenguva refu-yakarongwa yekupedzisira chinangwa mune izvi? tinoziva here yenguva refu yenguva pano?
Zvirongwa zveterevhizheni se iya yaJan Mulder, uyo akaenda kundotsvaga hupenyu hwusingaperi, anoita kunge achikwanisa kugadzirira vanhu zviitiko zvinouya. Tinowana sausage, sokunge zvakadaro, uye tinoda kuruma. Ndiani asingade kurarama nekusingaperi !?
Mira zvishoma! Icho chipikirwa che "hupenyu hwusingaperi" hachiiti kuti iwe ufunge nezve chero chinhu here? Icho hachisi chinhu icho zvitendero zvinotivimbisa? Zvakanaka, iri kuuya chaizvo izvozvi. Ini ndinogona saka fungidzira kuti chipikirwa chemesiya kubva 'gore' chinonyatso kukodzera mumufananidzo weiyo transhumanism. Muchokwadi: kana uropi hwaElon Musk huchokwadi, tinogona kuwana "denga idzva nepasi idzva" kuburikidza neiyo gore yekubatanidza, nekuti mitambo kubva ipapo ichave yakaita seinonzwisisika zvekuti pfungwa dzese dzepfungwa dzakananga muuropi hwedu. inokurudzirwa. Kana kunyora zvekare masero edu kubva mugore zvinoita kuti zviite kuti muviri usafa, masiya kubva mugore anogona kutotipa muviri mutsva. Vakafa vanogona kana kumuka kana ruzivo rwavo rweDNA ruchiri kune imwe nzvimbo muguva, sezvatiri kuedza kuunza mhuka dzakaparara seMammoth kuupenyu nhasi.
Nekudaro, iyo yekupedzisira chinangwa chiri mberi. Hardcore transhumanists vanozopedzisira vada kuti isu titaure zvakanaka kune ino nyika yekubereka uye tisanganise pamwe negore (iyo 'inosimuka mumhepo' kubva muBhaibheri?). Izvo zvinopa zvakawanda zvakanaka. Semuenzaniso, iwe haudi zvinhu zvakaomarara sematombo anodhura uye mafuta kuti ubhururuke kuMars. Iwe zvakare haufanirwe kudzoreredza mamiriro eMars kana mamwe mapuraneti. Iwe unongovaka denga reDigital iro risingazivikanwe kubva kuhupenyu chaihwo. Iyi nguva yekubatana pakati pevanhu neAI yakafanotaurwa makore apfuura neGoogle murume wepamusoro, mugadziri uye muzivi, Ray Kurzweil. Anodaidza nguva ino 'kusarudzika' uye anototarisira kusangana uku pakati pevanhu neAI mu2045. In ichi chinyorwa Ini ndinotsanangura zvakadzama kukosha kweruzivo urwu uye kuti tiri kuita ne 'kopi yeiyo yatove'. Zvinokurudzirwa kuti uverenge chinyorwa icho nokungwarira kana ino rese nyaya nyaya kupfuura. Nei izvozvo zvichikosha? Zvakanaka, ndeye 2019. Iyo inofungidzirwa yenguva yekusarudzika (uye nekudaro izvo zvese zvinovandudzwa kubva 'pakusafa' kunyora patsva pfungwa neDNA yedu, kusvika patiri iyo yatinozopinda mune simulations) saka ndeye chete makore 26 kubva panguva yekuverenga. Naizvozvo zvakanakisa munguva pfupi uye saka zvichaita chaizvo iwe nevana vako.
Lees pano nei mapurisa matsva akateedzera kubva kuYolanthe Cabau ane zita reDNA anobatsirawo pakugadzirira vanhu kuti vagamuchire zvinyorwa zveDNA dzenyika, kuitira kuti vanhu munguva pfupi varembera vari mugore uye iyo DNA inogona kunyorwazve.
Source chinyorwa listings: maxvandaag.nl
Nei vanhu vachiedzwa kuti vasaite kusafa uye kusangana neAI
Nyaya inokosha yehupenyu hwako huno
Iko 'ego' ndiyo chirongwa cheAI chinogutsa chizvinyorwa chevanhu-avatar bio-robot
Tags: aging, Anti, David Sinclair, DNA, nokusingaperi, Featured, Harvard, upenyu, zvokurapa, pireseri, piritsi, against, rejuvenation piritsi, kuchembera, kuchembera, Yolanthe Cabau
Ini ndinongodonhedza pasi yangu Martin Vrijland cap yeiyi…
« Yolanthe Cabau nemapurisa akateerana neDNA, inoyevedza John de Mol kugadzirwa (sezvakaita nhau ye ANP)
Iwewe wakapusa sewe? »
Total Visits: 15.824.938